Mpanohitra ny haino aman-jery sosialy | Martech Zone
Mpanohitra ny haino aman-jery sosialy
Sabotsy, Oktobra 9, 2010 Alarobia, Oktobra 26, 2011 Douglas Karr
Isika rehetra dia samy nanana azy ireo avokoa - ilay olon-dratsy izay mimenomenona sy mikotroka eraky ny fanehoan-kevitrao - tezitra ireo mpitsidika hafa anao ary mamorona fahatezerana amin'ny ankapobeny. Tena manahirana izany, saingy misy fomba iray hanakanana ilay olon-dratsy amin'ny haino aman-jery sosialy. Ity dia infographic lehibe napetrak'i Search Engine Journal miorina amin'ny Mpanohitra 8 amin'ny haino aman-jery sosialy.
Mazava ho azy, misy ny mampihomehy satria ny SEJ dia nahazo mpanohana tao amin'ny Infographic… Soa ho azy ireo fa ny rohy vokariny dia tsy an'ny mpanohana, raha tsy izany dia mandika ny iray amin'ireo mombamomba azy ireo izy ireo!
Maninona no tsy mahomby aminao ny paikadim-pifandraisana
Fampidinana sy fahaiza-mitarika ny haino aman-jery sosialy